ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5သင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတွင်အကြောင်း Talking ကိုရှောင်ရှားသင့်သောအရာတို့ကို
5 သင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတွင်အကြောင်း Talking ကိုရှောင်ရှားသင့်သောအရာတို့ကို
တစ်ဦးကပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတစ်ဦးနတ်သမီးပုံပြင်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအခန်းတွင်ရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းသင် "နဂိုအတိုင်း" ခေါင်းစဉ်ကိုတို့ထိရုံဖြင့်တစ်ဦးစုစုပေါင်းဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်. မေတ္တာကိုရှာဖွေခြင်းရုပ်ရှင်ဤမျှလွယ်ကူသောဟန်, ဒါပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့အသက်တာ၌အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်? Romance ကိုအစဉ်အမြဲချောမွေ့စွာပျံတက်ပါဘူး, သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုရှာဖွေအသီးသီးကျွန်တော်တို့ကိုတဦးအဘို့အမလွယ်ကူပေ. တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုသို့များအတွက်စစ်တိုက်ခြင်းငှါအဘယ်သို့သိမေးခွန်းတစ်ခုင်, နှင့် faux pas အောင်ရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လောက်, အထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်. ဤသူသည်သင်တို့အချင်းချင်း ပတ်သက်. အခြေခံပညာအမှုအရာအထဲကရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေကြသောအခါထိုအချိန်ကာလဖြစ်ပေမယ့်, အန္တရာယ်ကင်းစကားပြောဆိုသည့်အကြောင်းအရာများကပ်အကောင်းဆုံးက. ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်အကြောင်းပြောနေတာကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်အချို့သောအရာဖြစ်ကြ၏:
ဘယ်သူကမှသင့်ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်အရေးမကပြောပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ဆက်ဆက်မှာပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတွေအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံစကားလက်ဆုံခေါင်းစဉ်မ. နိုင်ငံရေးကိုမျှော်ရှိမယ်ပဲရန်လိုမုန်းတီးမှုကိုတစ်ဦးလေထုကိုဖန်တီးစေခြင်းငှါ,, ဤသင်လိုချင်သည့်အရာကိုမဖြစ်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, အနည်းဆုံးမတို့၏ဆက်ဆံရေးရဲ့ဒီအဆင့်မှာ ... တစ်ဦးကသမ္မတနိုင်ငံဒီမိုကရက်ပါတီသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ဖြစ်လာစေမည်မဟုတ်.
သင်ကဆယ်ကျော်သက်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်အများဆုံးဆက်ဆက်အချို့သင့်အစုစုအတွက်ဆက်ဆံရေးကိုပျက်ကွက်ခဲ့ကြ, ဤအပြည့်အဝကောင်းပါတယ်. လူတိုင်းကမ. နေပါစေသင်တို့၏ဖြစ်သူ / exes အကြောင်းပြော, ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲထိုကဲ့သို့သောစကားလက်ဆုံအဘို့အညာဘက်ကိုအချိန်မဟုတ်ပါ. သူမကတစ်ဦးဆိုတာကို control ခွေးမခဲ့? သူတစ်ဦးစုစုပေါင်းလူရှုပ်ခဲ့? သူ / သူမကိုသင်ဘာမှဒါပေမယ့်ခါးသောအသက်ဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်လို့ထင်နိုင်တယ်ကြောင့်ဤသင်ရုံတွေ့ဆုံကြတစ်စုံတစ်ဦးကပြောပြချင်ရာတစ်ခုခုမဖြစ်. အခြားတစ်ဖက်တွင် အကယ်., သင်သည်ထိုသူတို့နှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်သာစကားကြီးရှိသည်, သင်ကသူတို့ကိုကျော်ရမထင်မြင်ထားခဲ့စေခြင်းငှါ,, သင်တို့သည်မများမှာ, ထိုကွောငျ့, အခြားသောဆက်ဆံရေးစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေ. သင့်ရဲ့နေ့စွဲသင်သည်သင်၏ဖြစ်သူနှင့်အတူတက်ချိုးဖဲ့ဘာကြောင့်ကျောင်းထွက်ရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဆိုရင်, မရေမမျှမအပြစ်တင်ပါဝင်သောအဖြေသို့မဟုတ်နှစ်ခြိုက်ပေး.
Cleaner သို့မဟုတ် dirtier, ငါတို့ရှိသမျှသည်အတိတ်ကရှိသည်, ဤကျွန်တော်တို့မေတ္တာကိုရှာတွေ့မှခံစားခွင့်မဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ. သို့သော်, သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲပေါ်မှာသင့်ရဲ့အတိတ် misshapes အကြောင်းကိုဝါကြွားကြရမဆိုလိုပေ. အနည်းဆုံးတို့၏ဆက်ဆံရေး၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်အမှတ်တစ်ခုမှာသူတို့အမှုအရာတို့ကိုတချို့အကြောင်းသန့်ရှင်းသောလာရလိမ့်မယ်, သင်မူကား, ပယ်ရှားသင်ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းသည်အလွန်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထဲကသင့်ရဲ့နေ့စွဲတွှေရန်မလိုပါ.
အချိန်အားဖြင့်ဝင်အဖြစ်, အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများ, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ဇီဝနာရီသံတစ်ချက်ကိုနားထောငျဖို့စတင်. သင်တစ်မိသားစုကိုစတင်ရန်နှင့်လေးတွေရှိချင်ရှိရာအသက်အရွယ်တယ်, ဒါပေမယ့်သင်ပထမဦးဆုံးကလက်ျာဖက်ကိုရှာဖွေအကြံပြုလိုတယ်. မြင်းရှေ့တော်၌ထိုလှည်းထားမနေပါနဲ့!
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တွင်သင် ့. သင်သည်အဘယ်သို့အိပ်ရာအတွက်လုပ်နေတယ်ပျော်မွေ့, သင်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးစူးစမ်းရှာဖွေရန်သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့နေ့စွဲမဟုတ်ပါဘူး. အလားတူပင်, ဤသူသည်သင်တို့တစ်အလားအလာမိတ်ဖက်အကြောင်းကိုသိလိုအရေးအပါဆုံးအရာမဟုတ်ပါဘူး. သင်တို့သည်ဤအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ရငျးနှီး၏ညာဘက်အဆငျ့အောင်မြင်ရန်သည်အထိစောင့်ဆိုင်း.